Congresska oo u codeeyay xil-ka-qaadis iyo Trump oo soo saaray bayaan | Berberanews.com
Home WARARKA Congresska oo u codeeyay xil-ka-qaadis iyo Trump oo soo saaray bayaan
Washingtone-(Berberanees)-Ka dib markii Aqalka ay u codeeyeen 232 ilaa 197 in xilka qaadis lagu sameeyo – iyadoo taageero laga helayo 10 ka tirsan xisbiga Jamhuuriga – Trump wuxuu soo saaray bayaan fiidiyoow ah oo aanu ku xusin tallaabadan taariikhiga ah ee dhacay saacado yar ka hor.
Taa baddalkeeda, wuxuu u soo diray baaq degenaansho ah sida halista rabshadaha cusub.
Warbixintaasi waxay dhacday Isniinta waxayna door ka ciyaartay go’aanka Madaxweynaha ee duubista muuqaalka, sarkaal ayaa u sheegay CNN. “Ma jiro taageere dhab ah oon leeyahay oo aan waligii aqbali karin qalalaasaha siyaasadeed. Ma jiro taageere dhab ah oon ixtiraami karin fulinta sharciga ama calankeena weyn ee Mareykanka,” ayuu ka yidhi Trump.
“Hadda waxaan weydiisanayaa qof walba oo waligii aaminay ajandaheena inuu ka fikiro qaabab loo dejin karo xiisadaha, loo dejiyo xanaaqa isla markaana gacan looga geysto horumarinta nabadeynta dalkeena,” ayuu yidhi.
Dhamaadka barta, oo uu duubay Aqalka Cad oo aan ahayn kaamirooyinka telefishannada madaxa bannaan, Trump wuxuu ka deyriyey waxa uu ugu yeedhay “xadgudub aan horay loo arag oo ku saabsan hadalka xorta ah ee aan aragnay maalmihii la soo dhaafay.” “Dadaallada lagu doonayo faafreebka, tirtirida iyo liiska madow ee muwaadiniinta aan walaalaha nahay waa khalad waana khatar,” ayuu yidhi. “Waxa hadda loo baahan yahay waa inaan is dhageysano, oo aan is aamusinno.”
Previous articleIngiriiska: 1,564 qof oo 24 saac u dhintay coronavirus
Next articleFanaanka la tartamaya mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu xukunka dheer Afrika